ဘုန်းကျော်: 11/01/2008 - 12/01/2008
To KHAG from SH
Future Prospect (Burmese Version)
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Sunday, November 30, 2008
ဒီနေ့ ငယ်သူငယ်ချင်းနဲ့တွေ့တယ်။ ဘာမှမသိပဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဝေးသွားခဲ့တာ ၁၀-နှစ်ရှိခဲ့ပြီ။ ပြန်တွေ့တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀-နှစ်က အတိုင်း ဘာမှမပြောင်းလဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူက ရန်ကုန်မှာ။ ကျနော်က လူ့ဘောင်သစ် နယ်စပ်မှာ။ ဒီနေ့ သူ့ကိုအင်တာနက်မှာ တွေ့တယ်။
သူ့မျက်ဝန်းက အရောင်သိတ်မလက်ဘူး။ ဘာဖြစ်လဲသူငယ်ချင်း။ မပူနဲ့ ငါရှိတယ်။ ငါတို့ တော်လှန်ရေးရှိသေးတယ်။
ဗားပလက်စ်ရေ မင်းတို့ငါတို့ဟာ မွေးထဲက တော်လှန်ရေးသမားတွေပါကွာ.........
ဆရာဒေါက်တာမျိုးညွှန့်(စီးပွာရေးပညာရှင်)။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းထဲမှာ အထင်ကရ ရှိတဲ့သူ။ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးရင်းနဲ့ လူငယ်တွေကို အမြဲတမ်းအားပေးနေတဲ့သူ။ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို မြန်မာပြည်မှာ လုံးဝမရှိစေချင်တဲ့သူ။ တတိယနိုင်ငံမှာနေရပေမဲ့ အမြဲတမ်းတိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေထဲမှာ နစ်မွန်းနေသူ။
ရှားရှားပါးပါး ပညာရှင်တော်လှန်ရေးသမား။ အရမ်းလေးစားဖို့ကောင်းတယ်။ အမြဲတမ်းနိုင်ငံရေးကို လူငယ်တွေထက်တက်ကြွတယ်။
သူ့သမိုင်းကိုသိချင်ရင် Wikipedia နှင့် Google မှာရှာကြည့်။ သူက ကျနော့်ဆရာပါ။ ဆရာတော်လှန်ရေးကိုဆက်လုပ်နိုင်ပါစေ.........။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Thursday, November 27, 2008
ထိုင်းတွေကတော့ သူတို့အစိုးရကို အခုလိုပြတ်ပြတ်သားသားဆန့်ကျင်တယ်
ထိုင်းလူမျိုးတွေ ဗမာတွေကို တော်တော် ဒုက္ခပေးကြတယ်။ မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို မုဒိမ်းကျင့်၊ သတ်၊ ငွေမပေးပဲ၊ ခိုင်း စတာတွေအများကြီး။ ထိုင်းရဲတွေကပိုဆိုးတယ်။ တော်လှန်ရေးသမား တွေနှင့်အဖွဲ့ အစည်းတွေဆိုလည်း ထိုင်း ထောက်လှမ်းရေး၊ ရဲ ကိုပဲ ပေးနေရတာနဲ့ NGO ကရတဲ့ ငွေကိုမစားရဘူး။ အခုလည်းကြည့် ဘန်ကောက်မှာ လေဆိပ်ပိတ်တော့ တတိယနိုင်ငံသွားမဲ့ မြန်မာဒုက္ခသည်တွေအများကြီး ကြန့်ကြာနေကုန်ပြီ။ တော်တော် ဒုက္ခပေးတဲ့ထိုင်းတွေ။ ဒုက္ခသည်တွေဆိုတော့ သူတို့မှာ ငွေလည်းမရှိ။ စားစရာလည်းမရှိ၊ နေစရာလည်းမရှိ တော်တော်ဒုက္ခရောက်ရတယ်။ ဟင်း......ဟင်း......နော် ......ထိုင်းကိုပြန် ရောက်ရင်လား..လက်စားချေပေးအုံးမယ်။
ဘန်ကောက်ကိုမသွားကြပါနဲ့ရွှေမြန်မာတို့ခင်ဗျား....တော်ကြာ ရောရောင်ပြီး အသတ်ခံနေရအုံးမယ်....
အမှိုက်ပုံထဲက အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များ (ဓာတ်ပုံ)
အမှိုက်ပုံထဲကနေ ရွှေထွက်တယ်ဆိုတာ ကြာဘူးတယ်မဟုတ်လား။ တနေ့ သူတုိ့မြန်မာပြည်ကြီးကို ကောင်းအောင်တည်ဆောက်နိုင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ရင်ဖြစ်အုံးမှာ....။
ထိုင်းနိုင်ငံမဲ့ဆောက်မြို့ ကမြန်မာကလေးငယ်များ ဖြစ်ပါသည်။ ဓာတ်ပုံရိုက်သူကိုမသိရပါ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Tuesday, November 25, 2008
We are the same DPNS and ABSDF
Ko Htut, Ko Nyo, Ko KMT and KAMZ you look nice.
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Friday, November 21, 2008
You are not died in my heart.
Picture taken from www.kogingyi.blogpsot.com
မှတ်ချက်။ ။ အိုဘယ့်ဒုက္ခသည် ဆောင်းပါးမှ အဆက်ဖြစ်သည်-
ကျနော် လေ့လာကြည့်ရသလောက်ဖြင့် ဒုက္ခသည် စခန်းအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ပုံ ၀င်ရောက်နည်း (၃) မျိုးရှိသည်။
ပထမ တနည်းမှာ နအဖ စစ်တပ်၏ ထိုးစစ်ကိုခံရသော ကျေးရွာများမှ စစ်ဒဏ်မခံနိုင်၍ တိုင်းပြည်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသော စစ်ဘေးဒုက္ခသည် ဖြစ်သည်။
ဒုတိယနည်းမှာ လွတ်မြောက်နယ်မြေရှိ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ တော်လှန်ရေးသမားများနှင့် ၎င်းတို့၏ ဆွေမျိုးသားချင်းများ။မြန်မာပြည်တွင် သွားရောက်နေထိုင်ရန် မဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးနည်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ငွေရှင်ကြေးရှင်များနှင့်၊ အခွင့်အလမ်းရှာဖွေသောသူများသည် တတိယနိုင်ငံသို့သွားရောက်ရန် ၀င်ရောက်သောနည်းဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့သည် အများစုဖြစ်သည်။ သူတို့ကြောင့် ဒုက္ခသည် ဦးရေဖောင်းပွလာခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းပြဿနာ အရင်းမြစ်ကိုရှာဖွေကြည့်သော် စစ်အစိုးရကြောင့် နှင့် တိုင်းပြည်တွင်အခွင့်လမ်း နည်းပါးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် အမိမြန်မာပြည်ကို စွန့်ခွာလာရခြင်းဖြစ်သည်။ အားလုံးသော ဒုက္ခသည်များကို ကျနော်နားလည်းနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ကျနော်နားမလည်သော ဒုက္ခသည်လည်းရှိပါ သေးသည်။ အဘယ်သို့သော်ဒုက္ခသည်နည်း။ အတော်ထူးဆန်းသည်။
သူတို့သည် ဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်းမှာသာ နာမည်ပေါက်သည်။ လူတွေကတော့ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး မှာဖြစ်သည်။ သူတို့၏အလုပ်အကိုင်ကား အဘယ်နည်း။ အများစုသည် Company ပိုင်ရှင်တွေ၊ ရန်ကုန်မြို့ မင်္ဂလာဈေးတို့လိုနေရာတွေ ဆိုင်ဖွင့်ထားသူတွေ။
‘ခင်ဗျားတို့ဒီလောက်ချမ်းသာနေတာ မြန်မာပြည်ကနေ နိုင်ငံခြား သွားလို့မရဘူးလားလို့’ ။
သူတို့ဖြေတာက ‘ငါတို့က နိုင်ငံသားဖြစ်ချင်တာ’….
ဟုတ်ပါသည်။ ဒုက္ခသည်အဖြစ် တတိယနိုင်ငံကိုသွားရင် နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် အလွယ်တကူရှိတာကိုး။
ဒါ့အပြင်လူကသာ စခန်းအတွင်းမှာ မရှိတာ။ စခန်းအတွင်းကသတင်းများကိုတော့ ဦးဦးဖျားဖျားရတက် ပါသေးသည်။ ဥပမာ စခန်းအတွင်းမှာ လူစစ်မည်ဆိုပါစို့…… ထိုလူစစ်မည့်အချိန်ကို မြန်မာပြည်ကနေ အချိန်မီရောက်အောင်လာသည်။ (လူစစ်မည့် သူကိုယ်တိုင်ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားလေသလား)။ နောက်ပြီး ထိုလူများ ဘယ်လောက်ထိပေါက်ရောက်ပါသနည်းဆိုလျှင် တော်တော်ပေါက်ရောက်သည်ဟု ပြောချင်သည်။ ဥပမာ ထိုသူတို စခန်းအတွင်းသို့တဖွဲဖွဲဝင်ရောက်လာလျှင် သေချာပေါက် စခန်းအတွင်းမှာ တခုခုထူးခြားမည်။ မယုံမရှိပါနှင့် စခန်းအတွင်းမှာ ထူးခြားမှုကြုံရသည်။
နောက်ဆုံး အဘယ်မျှဖြစ်သွားသလဲဆိုရင် စခန်းအတွင်းမှာ စားဝတ်နေရေးအတွက်ပြောင်းဖူးသွားချိုး ရသော၊ ပန်းရံသွားလုပ်ရသော ဒုက္ခသည်များအနေဖြင့် ၎င်းတို့စခန်းအတွင်းမှာရှိနေလျှင်၊ လုပ်ငန်းခွင်သို့ မသွားရဲ။ စိုးရိမ်စိတ်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့နေရာဝင်ဦးသွားမည်လား (သို့) တခုခုထူးခြားလေမည် မလား။ သေချာသည်။ ၎င်းတို့စခန်းအတွင်းရောက်ပြီး တပတ်၊ ဆယ်ရက်အတွင်း လူစစ်မည်လား၊ DHS ခေါ်တော့မည်လား၊ ထွက်မဲ့ရက် ရတော့မည်လား၊ စသဖြင့်။ တခုခုတော့ထူးခြားသည်။ မလွဲသော တိုက်ဆိုင်မှုများပါပဲ။
အဲဒိအပြင် တတိယနိုင်ငံကူးပြောင်းမည့်စာရင်းကိုကတ်လျှင်လည်း ပြေးမကြည့်ပါနှင့် ၎င်းတို့က ထိတ်ဆုံးက ပါဘဲ။ အချို့ဆိုလျှင် တတိယနိုင်ငံကူးပြောင်းခါနီး မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ ကားတွေ၊ ခြံတွေကတော့ ပြည်တွင်းမှာဆက်လက်လည်ပတ် ခိုင်းထားဆဲပဲလေ။
ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုးတွေ တိုးတက်တဲ့တတိယနိုင်ငံတွေမှာ ရောက်သွားကြရင် အတွေး အခေါ်တွေမြင့်မားလာမယ်။ အတက်ပညာ၊နည်းပညာတွေ ရရှိလာမယ်။ အဲဒိလူ့အရင်းအမြစ်တွေဟာ မြန်မာပြည်ကြီးအတွက် အကောင်းဆုံးသော သံယံဇာတတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ယူဆမိတယ်။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ဖြင့် ကျနော်တို့ရဲ့ရိက္ခာတွေကို အသစ်အသစ်သော ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ဝေမျှပေးရတာ ဂုဏ်ယူစရာပဲပေါ့။
အခုလ ဆီဖြတ်ပြီး၊ နောက်လ ဆန်ပဲထပ်ဖြတ်ဖြတ်၊ အငတ်ပါခံနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ဖွား တတိယနိုင်ငံသား ရွှေမြန်မာတို့သာ မြန်မာပြည်ကြီးကို မမေ့ပါနဲ့လေ…………
ကျနော့်အနေဖြင့် လက်ရှိမြန်မာပြည်၏ နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို ယခုကဲ့သို့မြင်မိပါသည်။ ကာတွန်းဆွဲပေးသော ပညာရှင်အားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း.....အိုင်ဒီယာ ကိုဘုန်းကျော်(လူ့ဘောင်သစ်) နှင့် ကာတွန်းပညာရှင် in NuPoe ဒုက္ခသည်စခန်း။ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်။
စစ်အစိုးရလို့မပြောချင်ဘူး။ အစိုးရလို့ပြောရင် ဂုဏ်သိက္ခာရှိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ စိုးမိုးနေတာက အစိုးရ လို့ ခေါ်လို့မရဘူး။ လူတစ်စုက ဒမြတိုက်ထားတာ။ အဲဒါကို အစိုးရလို့ ခေါ်မယ်ဆိုရင် မိမိအမှားပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။
သူတို့ကို အဲဒိနိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကနေ အခုထိအသိအမှတ်ပြုထားတုံးပဲ။ ဘာ့ကြောင့်လဲ။ နအဖကိုသာ အသိအမှတ်မပြုဘူးဆိုရင် ဘာ့ကြောင့် သူတို့နယ်မြေမှာ မြန်မာသံအမတ်တွေ၊ သံရုံးတွေထားသေးလဲ။
ဘယ်ရောက်သွားလဲ မသိ။ လူကြီးဆိုတာ ဘာကိုခေါ်လဲဗျာ။ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ ဘာလဲ။ အခုထိ မတွေ့သေးဘူး။
သဘောတူ၊ ကြည်ဖြူတဲ့အချင်းအချင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့တယ်။ မတူရင် ခွဲတယ်။ တူရင်တွဲတယ်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Saturday, November 15, 2008
ယခုဓာတ်ပုံများကို မရှိမဲ့ရှိမဲ့၊ အင်တာနက်ခ၊ အချိန်၊ ပို့ခ တပြားမှ မရရှိဘဲ ပို့ပေးသောသူအား အထူးကျေးဇူးတင် ရှိကြောင်းပြောလိုပါသည်။
မြန်မာလူမျိုးတွေပီပီ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် မိမိယဉ်ကျေးမှုအား အစဉ်ထိန်းသိမ်းချင်သော စိတ်ဖြင့်......
ယခု ပုံအား စေတနာနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ တော်လှန်ရေးသစ္စာဖြင့်သော်လည်းကောင်း ရေးဆွဲပေးသော နို့ဘိုးဒုက္ခသည်စခန်းမှ ကာတွန်းပညာရှင်အား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
နို့ ဖိုးကထိန်က ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်(၃)က ၂-ရက်နေ့ ကနေ ၁၀-ရက်နေ့ အထိအလှူငွေ ကောက်ခံပြီး စုပေါင်းပဒေသာပင် သုံးခုပြုလုပ်ဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့ရပ်ကွက်တွေကလဲ သူတို့ဘာသာစုပေါင်း ပဒေသာပင်တွေ လုပ်ဖြစ်တယ်။ PAB တရပ်ကွက်လုံးပေါင်း ကို ပဒေသာပင် ၁၅ခုလောက်ရှိ တယ်။ ရပ်ကွက်တွေက ရတဲ့အလှုငွေအားလုံးပေါင်း ၁၀၀၀၀(ထိုင်းဘတ်ငွေ) လောက်ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်(၃)က ပဒေသာပင် တွေကို ၁၂-ရက်နေ့ မှာ နို့ ဖိုး စခန်းတခု့ လုံးလှည့်လည်တယ်။ ဓမ္မ၀ိဟာရ ကျောင်းကို ၁၃-ရက်နေမှာ ဆပ်ကပ် လှူဒါန်း တယ်။ အဲဒိနေ့ မှာဘဲ နို့ ဖိုးဒုက္ခသည်စခန်းအားလုံးက လူတွေကို ဓမ္မ၀ိဟာရ ကျောင်းတိုက် မှာ ကျွေမွေး ဧည့်ခံတယ်။မနက်၈ နာရီ ခွဲကစပြီး စတင်ကျွေမွေး တယ်၊။
မှတ်ချက်။ ။ နို့ဘိုးဒုက္ခသည်စခန်းကနေ သူတို့ရဲ့သတင်းလေးကို အခုလိုရေးပြီးပို့ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတင်ရန် မေ့သွားပါတယ်။
ဒီနေ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ဂျီတော့မှာ စကားပြောဖြစ်တယ်။ သူက ရန်ကုန်က Company တခုမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူပါ။ ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းရောက်သွားရင်းနဲ့သူက ပြောတယ်။
“ ဟရောင် …. ငါက အားမှ ကမ္ဘာပတ်လို့ရတာ….” ကျနော် ချက်ချင်းသဘောမပေါက်ဘူး။ ကျနော်က တိုးတိုးလေးပြောတယ်။ Shit မြင့်လှချည်လား….။ ဘယ်ဟုတ်မလဲ နောက်မှ သူက အားမှ အင်တာနက်ကို တက်လို့ရတာဆိုတာ သဘောပေါက်တယ်။ မသိရင်တော လေကြီးတယ်ပေါ့နော်….. စကားလုံးအသစ်ပါ…အထူးသဖြင့် ကျနော့်အတွက်ပါ။
သူ့ကို ကျနော်ရဲ့  ဘလော့ဂ်ကို ဖတ်ဖို့အတွက်ဖွင့်ခိုင်းတယ်။ သူကပြောတယ် ဖွင့်လို့မရဘူးတဲ့။ ကျနော်အခြား ဘလောဂ်တွေထပ်ပေးတယ်။ ကိုမိုးသီး၊ ကိုယောဟန်အောင်၊ ကိုဟန်လင်းထွန်း၊ ကိုဦးမသန္တာ စသဖြင့် ။ သူကပြောတယ်ဖွင့်မရဘူးတဲ့။ ဒါဆိုသေချာပြီ ပြည်ပမှာ လုပ်တဲ့ ဘလော့ဂ်တွေကို စောင့်ကြည့်ပိတ်နေပြီ။
မြန်မာပြည်က ဒေါ်လာ ၄ သန်းကျော် တန်သည့်ပတ္တမြားကြီး ပြန်မိပြီ
မြန်မာနိုင်ငံကအဖိုးတန်ပတ္တမြားကြီး ကိုသြစတြီးယားနိုင်ငံ Vinenna မြို့ မှာ သြစတြီးယားရဲတွေနဲ့ ဂျာမနီထောက် လှန်းရေးတွေပူးပေါင်းပြီး သူခိုးအကြီးစားတွေလက်ထဲကနေ ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဂျာမနီက ရတနာကုန်သည်တွေက မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဆီကနေ ၀ယ်ယူသွားပြီး မကြာခင်မှာပဲ ခိုးယူခံရတာပါ။ သူခိုးတွေဟာ သြစတြီးယားနိုင်ငံကို ခိုးထုတ်သွားတာကို ထောက်လှမ်းရေးတွေသိသွားလို့ စုံးစမ်းထောက် လှမ်းခဲ့ရင်းနောက်ဆုံးပြန်ရသွားပါတယ်။
ဒီပတ္တမြားကြီးဟာ မြန်မာနိုင်ငံက လူငါးလောင်းပြိုင် သတ်မှုထဲကနေရရှိပြီး ဂျာမနီက ရတနာကုန်သည်တွေကို စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ ရောင်းစား ခဲ့တာလို့သိရှိရပါတယ်။ ဒီလောက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ ရတနာတွေကို ပြည်ပမှာ တရားမ၀င်ခိုးထုတ်ရောင်းစားနေတဲ့ မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ် တွေဟာ အခုဆိုရင် ထားစရာငွေမရှိအောင် ချမ်းသားနေပါပြီ။ ဒီပတ္တမြားကြီးရဲ့ နာမည်ကို Pricess of Burma လို့အမည်ပေးထားပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေပိုင်တဲ့ ဒီပစ္စည်းကို တခြားလူမျိုးခြားတွေ လက်ထဲရောက်အောင် လုပ်တဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ဖယ်ရှားကြပါစို့............
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Saturday, November 08, 2008
အိုဘာမား (ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးကို အပြောင်းအလဲလုပ်မည့်သူ)
ဒီနေ့ ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ Channel9TV ကိုဖွင့်ကြည့်တော့ elentv ကလာတဲ့အစီအစဉ်ကို တွေ့တယ်။ အစီအစဉ်လေးက တော်တော့်ကိုပျော်စရာကောင်းတယ်။ ဟာသတွေနဲ့ပျော်စရာတွေကို ဖန်တီးထားတာပါ။ အမေရိကန်သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကို သီးသန့်ထုတ်လုပ်တဲ့ အစ်ီအစဉ်လေးပါပဲ၊ တချို့ ဟာသ လုပ်တဲ့ သူတွေ က ဘာ့ကြောင့် အိုဘာမားကိုကြိုက်လဲ ထောက်ခံလဲ လို့မေးတော့ အိုဘာမားက ငယ်တယ် မ၀ဘူး စတဲ့ ဟာသတွေနဲ့ သမ္မတ ကိုနောက်တယ်။ ဘာမှ လေးလေးပင်ပင် ကိုမတင်ဆက်ဘူး။
ကျနော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်း အဲလိုဖြစ်ရင် သိတ်ကောင်းမှာပဲ၊
အိုဘာမားကိုတော့ ထောက်ခံပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့သမ္မတဖြစ်လာဖို့ကို အခက်အခဲတွေကို ပွဲဝင်ခဲ့ရတဲ့သူပါ။ သူအနေနဲ့နိုင်ငံရေးထဲ စရောက်တော့ လူဖြူတွေရဲ့ အနိုင်ကျင့်ခံရ၊ ခွက်ခွက်လန်ရှုံး စတဲ့ အတားအဆီးတွေနဲ့ပါ။ ဒါပေမဲ့ သူကဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်တယ်၊ နောက်ဆုံး ၂၀၀၄-ခုနှစ်မှာ အထက်လွတ်တော်အမတ်နေရာကို မဲအများဆုံးနဲ့တက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမိုကရက်ပါတီမှာတုံးကလည်း ဟေလာရီနဲ့ နိုင်တော့ သမ္မတဖြစ်ဖို့အတွက် ချရပြန်ရော။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူဖြူတွေကြိးစိုးတာကို အိုဘာမားက အနိုင်ယူပြလိုက်တာပါ။ သူဟာကျနော်တို့ အားလုံးရဲ့သူရဲကောင်းပါ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Wednesday, November 05, 2008
မြန်မာပြည်က ဒေါ်လာ ၄ သန်းကျော် တန်သည့်ပတ္တမြားကြီးြ...
အိုဘာမား (ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးကို အပြောင်းအလဲလုပ်မည့်သူ...